Energy Sistem sport 6 famakafakan-doha tsy misy tariby | Androidsis
Energy Sistem fanatanjahan-tena headphones 6 fanadihadiana
Rafa Rodriguez Ballesteros | | hevitra
Androany izao hilazana aminao ny sasany Headphones TWS indray avy eo am-pelatanan'ny Energy System. Fandraisana an-tariby tsy misy tariby sport 6. Vokatra mazava tsara natao ho an'ny fanatanjahan-tena sy fanaovana asa ara-batana vita amin'ny fitaovana maharitra sy mahatohitra.
Androany dia mitondra safidy mahaliana iray hafa isika ho an'ireo izay te hankafy ny mozika ankafiziny eo am-panazarana ny spaoro tiana. Ary ny fanatanjahantena 6 an'ny Energy System no famenon-tsakafo mety indrindra hanaovana azy tsy misy famerana.
1 Sport 6 avy amin'i Energy System, mpiara-miasa amin'ny fiofanana
2 Unboxing sport 6 an'ny Energy Sistem
3 Volavola sy fomban'ny fanatanjahantena 6
3.1 Ny raharaha charger
4 Tabilao famaritana ara-teknika
5 Tombontsoa sy lafy ratsy
Sport 6 avy amin'i Energy System, mpiara-miasa amin'ny fiofanana
Raha mankaleo mitady headphone mety ianao mihaino ny mozikanao mandritra ny fanatanjahan-tena anio dia manana safidy tsara isika. Anisan'ireo tolotra be dia be eto an-tsena dia ara-dalàna fa sarotra amintsika ny manapa-kevitra. Amin'ity indray mitoraka ity dia holazainay aminao rehetra momba ny fanatanjahantena 6 an'ny Energy System.
Ny fanatanjahantena 6 ananana Fanamarinana IPX7 fanoherana ny rano. Aza matahotra hamandoana azy ireo amin'ny hatsembohana na satria mety hiparitaka izy ireo rehefa avy ny orana. Vantany vao vita ny fampiofanana anao azonao atao ny manasa azy ireo ao ambanin'ny paompy hanadiovana azy ireo Tsisy olana. Ary misaotra ny fixation "azo antoka"izay manolotra anay fanohanana malefaka, tsy hianjera mihitsy izy ireo rehefa manome ny zava-drehetra fanaovana fanatanjahantena ianao.
Si buscas ny headphones tonga lafatra hiaraka aminao amin'ny fotoana fanatanjahantena anao Aza manahy fa simba izany, aza adino ireo fiasa hita ao amin'ny fanatanjahantena Energy System 6. Teknolojia farany, fanoherana porofon-drano ary fahaleovan-tena ora maro. Io ve no notadiavinao? Vidio izy ireo izao amin'ny Amazon amin'ny fandefasana maimaim-poana.
Unboxing sport 6 an'ny Energy Sistem
Toy ny mahazatra dia jerentsika izay rehetra hitantsika ao anaty boaty an'ny headphone Energy System sport 6. Hitantsika headphone, cas de charger ary raha fintinina, izay rehetra azontsika antenaina, tsy misy tsy ampoizina na fanampiny.
Manana isika tariby mamaly ho an'ny raharaha charger izay tena fohy dia fohy. Bokikely kely an'ny toromarika miaraka amin'ny angona avy Warranty, sns. Ary, toy ny mahazatra amin'ny headphones Energy System, pads roa hafa ho an'ny headphone ary a fanoloana fingotra ivelany izay atao ao anaty sofina.
Volavola sy fomban'ny fanatanjahantena 6
Indray mandeha ihany, miaraka amin'ny fanampian'ny Energy Sistem, hitantsika headphone toa tsy misy iray hafa avy any an-tsena. Tena mandreraka ny mahita ireo vokatra izay mitovy be amin'ny tsirairay. Volavola nofaritana, nalaina tahaka na nahazo aingam-panahy avy amin'ny hafa izay nahatonga azy ireo mankaleo sy tena tsy tena izy. Ny fanatanjahantena 6 ananana famolavolana endrika toradroa hafa 100%.
Namboarina miaraka fitaovana plastika misy fikasihana malefaka ary vita matte. Nahita vokatra iray izahay manambatra loko roa izay mifanaraka tsara mahafinaritra. Iray manontolo maitso paoma malefaka miaraka amin'ny beige hafa malefaka ihany koa izay manolotra sary vaovao sy manaitra nefa tsy mihoa-pampana. Izao dia afaka mividy ny Energy Sistem sport 6 amin'ny Amazon.
izy ireo endrika intraural, izany hoe ny ampahan'ny fanamafisam-peo dia ao anatin'ny lalandran'ny sofina tanteraka. Ka ny traikefa dia feno sy mahafa-po nahita pads telo hafa izahay. Izany dia manamora ny fahafahan'ny olona mankafy tanteraka ny endrika mozika tsara indrindra.
Ny headset koa dia manana fingotra ivelany izay mety mifanaraka soa aman-tsara ho ren'ny sofintsika. fantatro mifanaraka amin'ny anatomika amin'ny atin'ny pinna ary manome fika fanampiny mba tsy hihetsika izy. Mahita fingotra fanampiny manana habe lehibe kokoa koa izahay. Vovoka izany afaka misintona isika raha tsy hanao fampiharana ara-panatanjahantena an'ny headphones.
Ny headphones manana bokotra ara-batana amin'ilay ampahany mivoaka. Afaka miaraka amin'izy ireo isika manantona na mandray antso. Ampandehano ny mpanampy feo. Ary mifehy ihany koa ny mitendry mozika miaraka amina filalaovana na fiatoana ary mandroso na mihemotra ny lalana. Ny bokotra dia manana fahatsapana tsara ka tsy mila manery tsindry be loatra isika ary mety hahatonga azy ireo hianjera.
Ny raharaha charger
Ny fanatanjahantena 6 an'ny Energy Sistem dia manana boaty famerenam-bidy toy ny an'ny headphones ihany. Amin'ny paoma maintso sy beige, na dia misy ihany koa ny kinova manga sy fotsy. ny endrika boribory Manintona ny maso sy ny mikasika azy io, toy ny headphones, malefaka izy ary mifikitra tsara.
Eto dia azonao atao ny mividy izao ny Energy System Sport 6
endri-javatra Seranana famahanana micro USB ary manolotra mihoatra ny telo fanampiny fiampangana feno Bateria finday tsy mila plug akory. ny henjana ny faritra an-tariby hiantohana ny mety tsara rehefa mandefa. Nahita izahay Jiro LED izay manondro ny satan'ny fiampangana. Ary bokotra iray hampandehanana na hamonoana ny famohana finday.
Una Tranga famahanana matevina sy mahatohitra azontsika atao tsara ny mitondra azy ao anaty paosy rehetra. Ary hiaro tanteraka ny headphones antsika izany rehefa mamaly. Vokatra manara-penitra izay manome fanatanterahana tsara amin'ny vidiny mirary.
Tabilao famaritana ara-teknika
modely sport 6
Fahita matetika 20 Hz - 20 kHz
Asa matetika 2.4 GHz
sehatra hatramin'ny 20 metatra
Fanaraha-maso ny volume SI
Fanaraha-maso playback SI
Mpanampy amin'ny feo mifanentana SI
Bateria finday 45 Mah
fizakantena Ora 5
Charger caster bateria 300 Mah
Fahaleovan-tena fanampiny Ora 15
Fotoana famenoana tanteraka Ora 1
Refy Headphone 25 x 25 mm
Lanjan-doha 5 h
Fatra refin'ny casera 55 X 32
Lanjan'ny charger 48 h
vidiny 47.99 €
Rohy mividy Energy System Sport 6
Mety tsara an'ny headphones misaotra ireo robina miovaova izany dia ao amin'ny faritra anatiny anatiny amin'ny sofina.
El famolavolana manintona ary fitaovana ny fananganana mahomby amin'ny fampiharana ara-panatanjahantena.
La Fanamarinana IPX7 Mahatonga antsika tsy hatahotra sao ho simba izy ireo raha mando na misaboka.
Fanitsiana tonga lafatra
El kely loatra ny famandrihana taribyoy raha ampifandraisintsika amin'ny rindrina izy ireo dia mihantona foana.
La fizakan mijanona kely fohy, indrindra ny an'ny cas de charger raha jerena ny refy. Mety misy bateria miaraka amina 300 mAh maimaim-poana misy.
Tariby fohy dia fohy
Fanatsarana ny fizakan-tena
Energy System Sport 6
Famerenana ny: Rafa Rodriguez Ballesteros
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Energy Sistem fanatanjahan-tena headphones 6 fanadihadiana
Infinix dia manambara Hot 9 sy Hot 9 Pro: eo anelanelan'ny elanelam-potoana misy an'i Helio P22 sy bateria lehibe
Ity ve no mpikirakira ny Samsung Galaxy Note 20?